» फुर्सदमा पढ्छु, टिभी हेर्छु, डान्स गर्छु !
६ माघ २०७५, आईतवार २२:१६
हेटौंडा ५, चिल्ड्रेनपार्ककी सन्ध्या पोख्रेल अहिले मकवानपुर सहकारी अस्पतालमा नर्सका रुपमा कार्यरत छिन् । बाइस वर्षिया सन्ध्याले मकवानपुर टेक्निकल इस्टिच्युटबाट अनमी अध्ययन् गरेकी हुन् । आधुनिक राष्ट्रिय माविबाट २०६८ मा एलएलसी गरेकी उनले मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा बीए अध्ययनरत छिन् । विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्घ भएर सामाजिक कार्यको अनुभव समेत बटुलेकी उनीसंगको छोटो कुराकानी :
– तपाईंको नाम सन्ध्या, तपाईंको नामको अर्थ के होला ?
सन्ध्या भनेको साँझ हो नि ।
– आजभोली के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
त्यही हो, अस्पतालको काममा जान्छु । परीक्षा आउँदैछ, यसकै तयारीमा छु । मैले अनमी पढेका कारण मकवानपुर सहकारी अस्पतालमा एउटा नर्सको हैसियतमा काम गर्छु र अस्पतालमा रहँदा नर्सको जिम्मेवारीमा पर्ने सम्पूर्ण काम गरिन्छ । विरामीको हेरचाह गर्ने, समय–समयमा औषधि दिने तथा पारिवारिक वातावरणमा उनीहरुको ख्याल गर्ने काम गर्छु । सुरु सुरुमा भन्दा अहिले मैले कामको अनुभव बढेको छ अनि डाक्टरहरुबाट पनि नयाँ नयाँ काम सिक्ने मौका पाएकी छु ।
– अहिलेसम्मको भोगाईंको आधारमा जीवन भनेको के हो जस्तो लाग्छ तपाईलाईं ?
मलाई लाग्छ जीवन भनेको मृत्युको पखाईं हो । जीवन धर्म हो, जीवन भनेको समाजमा आफ्नो अस्तित्व जोगाइ रहनु हो । जीवन भनेको एउटा असल नागरिक बन्नु हो तर मेरो जीवनभरी जीवन भन्ने शब्द भनेको सेवा गर्ने हो, जुन म निस्वार्थ भावले गर्छु र गर्नेछु ।
– अहिलेसम्मको अविष्मरणीय क्षण कुनै छन ?
मेरो जीवन सेवामै लागेको भएकाले कुनै दिन अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्दा मान्छे मर्छन् । कसैसंग पैसा नभएर उपचार गर्न नसकेर मर्छन् भने त कति डाक्टर र नर्सको लापरबाहीले पनि मर्ने गर्छन्, सबै डाक्टर नर्स यस्ता हुदैनन् । यस्ता केही घटना देख्दा मलाई मन दुख्छ । यस्तै क्षणहरु अविष्मरणीय लाग्छ ।
– तपाईले जीवनमा लक्ष्य चाँही के लिनुभएको छ ?
असल नागरिक बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । निवास्र्थ रुपमा सेवाभावले मेरो रुचीको काम गर्न पाइरहुँ भन्ने लाग्छ । भविष्य त कसले पो देखेको होला र ? तर पनि भविष्य चाँही राम्रहो होस् । जीवनमा स्वार्थको भावना नआओस् । दुःखको बेला आत्तिन नपरोश अनि सुखको बेला मात्तिन नपरोस् ।
– माया भनेको चाँही के हो जस्तो लाग्छ नि तपाईंलाई ?
माया नै सेवाको दोस्रो नाम हो । जस्लाई हामीले सम्मान र माया गर्छौ, उसले नि हामीलाई माया र सम्मान गर्छन् ।
– कसैलाई माया गर्नुभएको छ ? सबैभन्दा बढी माया कसको लाग्छ ?
माया त सबैलाई गर्छु र मेरो मनमा कसैका लागि घृणा र नराम्रो विचार नआओस् । सबैभन्दा बढी माया म मेरो ममी, बाबालाई गर्छु उहाँहरुकै कारण म आज यहाँ छु ।
– कसैको लभमा चाँही पर्नु भएको छ कि छैन ?
लभको मिनिङ् नै माया हो, म सबैलाई माया गर्छु र त मलाई पनि सबैले माया गर्छन् । कसैको लभमा पनि छु तर भविष्यमा जे लेखेको छ त्यही हुन्छ ।
– अनि विवाह चाँही कहिले गर्ने सोच छ नि तपाईंको ?
विवाह त सबैले एकचोटी गर्नैपर्छ तर मेरो धारणा के हो भने जो संग तपाईंले विवाह गर्नुहुन्छ उसैलाई जीवनमा सुख, दुःखमा साथ दिनुपर्छ । बाबाआमाको सल्लाहमा समय आएपछि विवाह गर्छु ।
–जीवनसाथी चाँही कस्तो होस् भन्ने चाहाना छ तपाईंको ?
मलाई धेरै माया गर्ने, भावना बुझ्ने, विश्वास गर्ने, कहिल्यै धोका नदिने अनि मेरो परिवारको रेस्पेक्ट गर्ने जीवनसाथी होस् भन्ने चाहाना छ मेरो ।
– फुर्सदका बेलामा चाँही तपाई के गर्नुहुन्छ ?
कामबाट फुर्सद भएको बेला पढ्छु, टिभी हेर्छु, डान्स गर्छु ।
– तपाईलाई कस्तो बेलामा रुन मन लाग्छ ?
मन कमलो भएकाले मलाई त कोही रोयो भने पनि रुन मन लाग्छ । कसैमाथि नराम्रो भएपनि रुन मन लाग्छ । टिभीमा रुवाउने फिल्म हेर्दा पनि रुन मन लाग्छ । कसैले ठूलो स्वरले गाली ग¥यो भने पनि रुन मन लाग्छ । कसैले गरीबमाथि नराम्रो ग¥यो भने, साना बालबालिकालाई अर्काको घरमा लगेर काम लगाएमा रिस उठ्छ । मेरो घरमा पहिला गाई थियो, ममीले बेचिदिनुभयो त्यो दिन त म रोएकी थिए । अस्पतालमा दुई वर्षिय बच्चाको मृत्यु भयो, त्यो बेला उसको आमा र परिवारका अरु सदस्य रोएको देखेर म पनि रोएकी थिए ।
– खुसी चाँही तपाई कस्ता कुरामा हुनुहुन्छ ?
म अहिले यहाँसम्म आइपुगेकी छु यो नै खुसीको कुरा हो । कहिले चाँही घरमा भोक लाग्यो भन्ने मान्छे आउँछन् र उसलाई केही खानेकुरा खान दिँदा खुसी लाग्छ ।
मध्यस्थताले मसंग मेरो जीवनको छोटो मिठो अनुभव बाँड्ने मौका दियो यसका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।